Xukuumadda Liibiya oo weli ku adkeysaneysa dilka ay ku xukuntay Kalkaaliyaashii reer Bulgaariya
Ikraam Cali-kaar | July 12, 2007
Midowga Yurub ayaa waxaa hadal ay soo saareen waxaa ay ku sheegeen iney aad ugu xun yihiin go'aaka ay maxkamada sare ee dalkaasi Libiya ku adkeysatay taasoo ah ineysan katanasulin dilkii toogashada ahaa ee horey ugu xukuntay kalkaalisooyin u dhashay dalkaasi Bulgaariya iyo dhaqtar Falastiini ah oo dalkaasi hore ugu shaqeynyey kuwaasoo carruur gaareysa 460 carrruur ah la sheegay iney ku talaaleen cudurka dilaaga ah AIDS-ka. Qoraalka maanta kasoo baxay maxkamada ayaa la akhriyey xilli aysan maxkamadd xaadir ku aheyn, waxaana sidoo kale qoraalkani yimid maalin kadib markii madaxweyne Qadaafiga dalkaasi uu sheegay iney jiraan dabasanaan ka timid waalidiinta carruurtaasi dhashay hadalkan ayaa sidoo kale waxaa si taxadar leh u soo dhaweeyey Midowga Yurub laftooda.
Muranka ka taagan amuurtan ayaa waxaa y keentay in bilowgii sanadkan ay reer Yurub shaaciyeen iney bixinayaan xaal marin la xirriirta dhibaatada caruurtaas soo gaartay, walow aan si rasmi ah loo shaacin gaarta. Isbitaal ku yaala magaalada Banqazi ee dalkaasi ayaa carruurtani cudurkaasi dilaaga uga yimid, 56 kamid 460 carruur ah ayaa u geeriyooday cudurkaasi arrintaasina waxaa ay keentay qeylo dhaan xoogan ka timid eheladoodi. Dhaqarka falastiiniga ah iyo kalkaaliyeyaashaasi reer Bulgaariya ayaa ku doodaya ineysan wax dambi ah ku laheyn dhibataadasi dhacday waxaana ay sheegeen qirashadoodii ay qirteena ay timid markii jir dil lugu sameeyey. Dowlada Bortugaal oo haatan heysta xilka meertada ah ee midowga Yurub ayaa sheegtay iney ku da daaleyso siddii arrintan xal waara looga gaari lahaa.
Labo kamid ah raggii fulin lahaa weeraradii dhicisoobay ee dalka Ingiriiska oo xabsi daa'in lugu xukumay
Labo kamid ah raggii ka qaraxyada ka geystay dalkaasi Ingiriiska ayaa xabsi daa'in lugu xukumay, mid kamid ah afartaasi nin ayaa misna waxaa lugu xukumay 40 sanno xarrig ah kadib markii ay gacan ka geysteen weeraradii dhicisoobay ee lugu qaadi lahaa tareenada mara dhulka hoostiisa ee magaalada London.
"Ma aaminsani ineysan qeyb ka aqeyn raggani weerarada qorsheysan ee Alqaacida hogaanka u heyso" Adrian Fulford oo isagu ah garsooraha maxkamada oo intaasi hadalkiisa ku darray in raggani dhaaca ay geysan lahaayeen ay ahaan laheyd dhimasho iyo dhawaac dad kor u dhaafay boqolaal ruux.
Ra'iisal wasaaraha cusub ee dhawaan hogaanka dalkaasi la wareegay ee Gordon Brown ayaa sheegay in xukuumadda kala munaaqishoon doono sidoo loo saari lahaa sharci ka dhan ah argagaxisada iyo sidii si fudud sharciga loo horkeeni lahaa kuwa falalkaasi lugu tuhmayo."Waxaan rajeynayaa in dhamaan asxaabta siyaasadeed aan isku afgaran dooni arrintan" ayuu yiri Brown oo misna sheegay inuu eegayo sidey suuragal ku noqon karto in la dheereyo ciqaabta qofka falalka noocaas ah lugu tuhmayo horey u aheyd in xabsiga lugu sii heyn karro 28 cisho oo qura, islamarkaasina la dabalo lana keeno cadeymo la xirriira waxyaabaha lugu heysto qofka falkaasi lugu tuhmayo.
Xiisadii ka taagneyd masjidka cas ee dalkaasi Pakistaan oo la soo afjray
Ciidamada dalka Pakistaan ayaa soo afjaray rabashadii sideeda cisho qaatay ee ka jiray masjidka cas ee magaalada Islaamabad.Afhayeen u hadlay ciidamada dalkaasi waxa uu sheegay iney af jareen howlgalkoodi koowaad,iyagoona meesha ka tirtiray kooxaha islaaminyinta ah ee halkaasi kacdoonka ka waday. Wakaalada wararka ee AP waxaa ay soo werisay in intii xiisadahaasi socdeen ay ku geeriyoodeen dad gaaraya sideetan qof. Waheed Arshad oo ah afhayeenka ciidamada waxa uu sheegay in weli ay jiri karto in goobihii xaasaduhu ka taagnaayen ay baaqi ku yihiin waxyaabaha qarxa iyo hub balse laga nadiifiyey kooxaha islaaminyiinta ah. Xiisada masjidka ayaa bilaabatay markii arday gaareysa 500 ay masjidkaasi isku gadaameen hogaamiye islaamiyiin ahina uu halkaasi ku jiray.